Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Ọ bụ nnọọ a maara nke ọma eziokwu na Europe bụ ihe kasị mma na-aga n'ihi àgwà cheese. Na dị ka a cheese n'anya, eleghị anya ị chọrọ ịmata nke bụ ihe kasị mma cheese Europe nwere na-enye na otú ahụ na ọ. Sonyere anyị ka anyị na-agba ọsọ na…
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji The Best European restaurant Michelin ndu awade a oké mmalite ka na-eme atụmatụ a ụgbọ okporo ígwè eme njem gburugburu Europe. The Michelin ndu ugbu a na-enye European njem a nhọrọ nke ụlọ oriri na ọ andụ andụ na hotels na 38 European obodo. Atọ ọhụrụ n'obodo e kwukwara na a 2019 mbipụta: Zagreb…
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Ọ dịghị onye maara n'ezie n'ezie na akụkọ nke French fries na France. Anyị nwere ike ghara ọbụna-n'aka ma ọ bụrụ na ha na-abịa site na France, na niile. Chere, Kedu?! Yeap, ị nụrụ na o ziri ezi – ma Belgians na French kwuru nri a, ha abụọ nwekwara akụkọ…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Nri dị ebube, karịsịa nri na-atọ ụtọ. Ọ bụ ya mere mfe ịbụ ekwe ihe ya mgbe bi na Europe na-enye gị nke ukwuu kpatara ya! The kasị mma obodo foodies nọ Europe, atụkwasị anyị obi anyị foodies nakwa, and so will you…